Ny herinandro faha 6 amin'ny maha-bevohoka - inona no mitranga amin'ny zazakely sy ny mamany? Ny herinandro fahenina amin'ny fitondrana vohoka - fivoarana
Ny herinandro faha-6 ny bevohoka - famantarana ny fivoaran'ny haibolam-pon'ny zaza sy ny fihetseham-pony
Ny dingana voalohany amin'ny fizotry ny fitondrana dia miavaka amin'ny fitomboan'ny embryon. Isan'andro ao anatin'ny vatana kely, misy rafitra, taova na rafitra iray manontolo. Ny herinandro faha-6 amin'ny maha-bevohoka azy, izay ny embryon no mampivelatra ny endriky ny rantsana, dia tsy fiatoana.
Ny herinandro faha-6 amin'ny fitondrana vohoka - famantarana
Manamarina izany ny famantarana ny maha-bevohoka amin'ny herinandro 6 ka tsy misalasala ny vehivavy bevohoka ao amin'ny toerany. Ny fitsapana bevohoka maro dia nahitana vokatra tsara. Samy manamarika ny fisehoan'ny famantarana hafa ihany koa ny vehivavy, manondro amin'ny fomba ofisialy ny fitondrana. Saika ny fanamarihana rehetra dia nitombo ny fahatsapana ny fofona, ny fitomboan'ny salady, ny tsy fahampian'ny rivotra, ny fahalemena ary ny reraka.
Ny fihenan'ny taolam-paty dia manjombona, lasa mihetsiketsika izy ireo. Ny vehivavy sasany dia mahatsikaritra ny fanamafisam-peo kely, ny fanamafisana ny faritra mitentina. Na dia zavatra kely tampoka eo amin'ny tratra aza dia mety hiteraka fahatsapana mampihetsi-po izay mandalo haingana. Vehivavy bevohoka marobe dia mety efa niaina toxemia: ny fihinanan-kena, ny fitefena, ny aretin'andoha, matetika dia manelingelina ny vehivavy bevohoka indrindra, indrindra amin'ny ora maraina.
Herinandro 6 herinandro vohoka - izao no volana?
Mba hamaritana ny vanim-potoan'ny fitondrantena dia mitodika amin'ny dokotera ny vehivavy bevohoka. Ny toeram-pitsaboana dia manitsy, mifototra amin'ny datin'ny andro voalohan'ny fotoana fadimbolana farany. Ny vokatra azo noho ny fikarohana toy izany dia antsoina hoe fiterahana. Tsy mitovy amin'ny embryonique amin'ny fomba lehibe mandritra ny 14 andro. Mba hamaritana ny faharetan'ny vanim-potoanan'ny embryon, dia ilaina ny mahafantatra marina ny datin'ny fahatanorana, izay ho sarotra ho an'ny vehivavy maro ny miantso.
Tsara homarihina fa ny dokotera dia mitarika foana ny fitondrana vohoka, izay milaza ny faharetany mandritra ny herinandro. Ity fampahalalana ity dia mampahafantatra ny reny hoavy amin'ny fandraisana. Matetika anefa ny vehivavy dia te-handika azy ireo amin'ny volana maromaro. Amin'ity tranga ity dia misy olana. Amin'ny fampiharana dia tsotra ny fanitsiana, saingy ilaina ny mahafantatra karazana maromaro. Ny volana ho an'ny mpilalao dia 4 herinandro, na dia tsy mitovy aza ny isan'ny andro ao amin'ny kalandrie. Mandritra izany, dia mitranga izany: 6 herinandro vohoka - 1 volana sy 2 herinandro. Ny volana faharoa amin'ny maha-bevohoka dia mahatratra ny afovoany.
Herinandro 6 herinandro vohoka - inona no mitranga amin'ny zaza?
Miteraka fiovana maro ny foetus amin'ny herinandro faha-6 amin'ny maha-bevohoka. Nandritra io vanim-potoana io, dia nipoitra teo amin'ny toeran'ny rindrina sy ny tongotra ny korontana, vita ny taompolo manontolo. Ny fananganana karazam-batana kely iray dia manomboka, avy eo avy amin'ny fanavahana, ny taolana, ny tendron-tsiranoka ary ny taolam-paty. Misy fananganana antontan'isa momba ny taova sy ny tsiranoka. Ny tavoahangin-tsiranoka dia manjary, ny aty dia napetraka, izay amin'ny ambaratonga voalohany amin'ny fampandrosoana dia hanao ny asan'ny hematopoiesis.
Ny rafitra fitsaboana dia miforona. Ny fantsom-bokatra voalohany dia miseho, izay manana halava sy kalesy. Efa niforona ny fo, saingy tsy misy afa-tsy efitra roa. Misy ny fananganana ny tosi-tsiram-borona - ny tohan'ny thmôla, izay avy eo dia miteraka ny fananganana ny rafitra fiarovan'ny zazakely ho avy. Misy fioram-piravahana ao amin'ny rafi-pisefoana, fa mandritra ny fotoana maha bevohoka dia mahazo oksizenina avy amin'ny renim-pianakaviana ny zazakely.
Ny haben'ny fetra amin'ny herinandro faha-6 amin'ny fitondrana vohoka
Amin'izao fotoana izao, ny haben'ny embryon dia tena kely. Ny fametrahana azy dia tsy azo atao afa-tsy amin'ny fikarohana momba an'i Etazonia izay mazàna amin'izao fotoana izao no mazàna. Araka ny fijerin'ny mpandinika ny embryologues, amin'ny herinandro 6 amin'ny maha-bevohoka dia ny haben'ny foetus dia 4-9 mm. Azo atao ny mandinika ny singa tsirairay amin'ny vatany amin'ny fampiasana fitaovana ultrasound avo lenta, izay tsy misy afa-tsy amin'ny toeram-pitsaboana lehibe.
Ny zaza aty amin'ny herinandro faha-6 dia manana volo eo amin'ny 1 g. Tsara homarihina fa miankina amin'ny antony maromaro ny mari-pahaizana anthropometrika, noho izany dia mety tsy mitovy ny lanjany sy ny lanjan'ilay zazakely amin'ny vehivavy samihafa. Anisan'ireo antony mahatonga ny fiantraikany amin'ny fivoaran'ny zaza ao amin'ny atidoha:
toetran'ny metabolika ao amin'ny foetus;
Karazan-damba avy amin'ny vehivavy bevohoka.
Herinandro 6 - Fampandrosoana ny foetus
Amin'ny vanim-potoana fitondrana 6 herinandro, ny fivoaran'ny embryo dia misy dingana lehibe. Vetivety dia mibaribary ny fantsom-borona, ny fizarazarana ny sela ao amin'ny nerveille dia mifanaraka amin'ny tontolon'ny rafi-pitabatabana amin'ny zaza vao teraka. Mipoitra ny atidoha, izay mikorontana amin'ny ho avy sy ny hemispheres havia amin'ny atidoha.
Misy fampiroboroboana ganglia, izay hampitaingin-tsoavaly avy amin'ny atidoha sy ny tadim-boaloboka manerana ny vatana. Eo amin'ny lohany ny vatan'ny embryon dia misy plastika kristaly, izay hamoaka ny fitaovana famantarana ny zazakely avy eo, dia hovana ho volo aho. Ankoatra azy ireo dia ny plaquoids amin'ny sofina, avy eo, rehefa mitombo ny embryon, dia hiorina ny taova sy ny fandanjana.
Inona no hitan'ny embryon amin'ny herinandro faha-6 amin'ny maha-bevohoka azy?
Ny fiofanana amin'ny herinandro faha-6 amin'ny maha-bevohoka dia miova ivelany. Ao amin'ny tapany ambony, eo amin'ny faritra misy ny endriny, ny vava, ny orona, ny sofina, ary ny fossa dia voatendry. Mipoitra tsikelikely ny fiforonan'ny maso, fa mbola eo amin'ny andaniny roa amin'ny loha. Rehefa dinihina akaiky ny foetus dia azo jerena ny fanombohan'ny valanorano sy vava ho avy. Mihabetsaka ny horita ary manjary sarotra kokoa. Eo amin'ny faraingo dia mamorona tongotra tongotra sy tanana, izay miseho ny sombiny amin'ny rantsantanana.
Herinandro 6-n'ny vehivavy bevohoka - inona no mitranga amin'ny renim-pianakaviana?
Raha miresaka momba ny vanim-potoana toy ny 6 herinandro ny fitondrana vohoka, inona no mitranga amin'ny vatan'ny vehivavy, amin'ny voalohany, ny dokotera manosika hormonal fanarenana. Ny firafitry ny membranes fetal hCG dia manentana ny volo mavo, izay mety hampitombo ny habeny. Vokatr'izany dia mitombo ny haavon'ny progesterone vokarin'ny fanabeazana. Avy hatrany, ity hormonina ity dia tompon'andraikitra amin'ny fivoarana ara-dalàna ny vohoka.
Amin'ny alàlan'ny hetsika progesterone, ny herinandro faha-6 amin'ny maha-bevohoka dia miaraka amin'ny fanovàna ivelany ny vehivavy. Mitombo ny habetsaky ny glandy, ary lasa miloko mainty mainty ny faritra misy azy. Ny fitomboan'ny isan'ny valan-drongony sy ny lavany dia miteraka fitomboan'ny vehivavy. Ankoatr'izany, eo ambany fitarihan'ny progesterone, dia mihena ny fihenan'ny vozon'ny bladder sy ny tsinontsinona, izay miteraka fanasitranana sy fikorontanana matetika.
Ny herisetra 6 herinandro - fahatsapana vehivavy iray
Amin'ny maha-bevohoka ny herinandro 6, ny fampivoarana ny foetus sy ny fahatsapana ny maman mbola ho avy dia mifamatotra amin'ny fiovan'ny hormone niova. Vokatr'izany fiovana izany dia maro ny vehivavy bevohoka miatrika reraka, reraka, mahatsiravina, mitebiteby matetika. Misy fihenam-bidy mihoam-peo amin'ny ratsiratsy, izay matetika miteraka fanadontoana, alahelo, fahantrana. Ny fanasitranana izany rehetra izany dia mety ho toxicose, izay matetika no miseho tampoka.
Belly amin'ny herinandro 6 herinandro
Ny zava-misy dia efa herinandro fahenina amin'ny maha-bevohoka azy, ny olona manodidina ny vehivavy ary tsy mahafantatra raha tsy nilaza azy ireo momba izany. Ny tovovavy amin'izao fotoana izao dia mihamitombo kely ary tanteraka ao anaty lavaka misy ny valizy. Ankehitriny, araka ny habeny dia azo oharina amin'ny plum. Ny fitomboan'ny taova dia mitranga amin'ny lafiny rehetra, fa amin'ny ankapobeny, dia hita ao amin'ny faritra misy ny tranon-jaza izy io, izay matetika no mitroka ny fambolena.
Ny kibo kely amin'ny bakteria kely dia tsy hita afa-tsy amin'ny vehivavy mena. Na izany aza, na ny tsy fisian'ny fiovana ivelany aza dia tsy mamela vehivavy iray hisalasala ny toerana misy azy. Miaraka amin'ny fitomboan'ny taovam-pananahana dia hitombo ihany koa ny kibo. Tsara homarihina fa ny ampahefatry ny tranonjaza amin'ny faran'ny vohoka dia mitombo avo dimy heny noho ny tamin'ny voalohany!
Fanokanana amin'ny herinandro faha-6 amin'ny fitondrana vohoka
Raha misy bevohoka 6 herinandro, dia tsy manova ny volony sy ny toetrany ny fitsaboana amin'ny vaginal. Ny vehivavy iray dia mijery mazava tsara, kely dia somary entin-koditra kely ao anaty boky kely. Tsy misy ratra, tsy misy loto vahiny. Ny fiovana eo amin'ny loko, ny natiora, ny fisehon'ny fofona mampandroso dia heverin'ny dokotera ho mariky ny fanakorontanana ny rafitra fananahana, izay mitaky fitsaboana ara-pahasalamana.
Ny dokotera dia tena manahy mikasika ny tsiranoka mena amin'ny herinandro 6 amin'ny maha-bevohoka azy. Ity soritr'aretina ity dia mety manondro ny fitondran-tena amin'ny fomba fitondrana, toy ny fanalan-jaza an-tsokosoko. Amin'ny tranga toy izany, mahita vehivavy marary sy fahatsapana ao amin'ny kibon'ny ambany ny vehivavy, izay manimba ny endrika voalohany. Rehefa nandeha ny fotoana dia mihamitombo ny fanaintainana, ary mitombo ny habetsaky ny sekretera (indraindray dia azo atao ny mivoaka ny tranon-jaza). Rehefa hita ity fisehoan-javatra ity dia tokony hiantso dokotera avy hatrany ny vehivavy.
Ny fijaliany amin'ny herinandro faha-6 amin'ny fitondrana vohoka
Ny aretim-po, ny fahataran'ny herinandro faha-6 amin'ny fitondrana vohoka, dia mety ho voan'ny toxicose. Manana fohy fohy sy mitokona izy ireo. Na izany aza, amin'ny toe-draharaha misy ny herinandro fahenina amin'ny maha-bevohoka, dia manintona ny kibon'ny ambany kokoa, tokony hampahafantarina ny vehivavy sy hampahafantatra ilay dokotera, izay mitarika ny bevohoka. Ity soritr'aretina ity dia mety manondro ny fandrahonana ny fampiatoana ny fitondrana vohoka. Raha toa ka mahatsikaritra ny endriky ny tebiteby sy ny fitenenana amin'ny endriny, miaraka amin'ny ra avy ao amin'ny vava - miangavy dokotera.
Inona no asehon'ny ultrasound amin'ny herinandro 6 herinandro vohoka?
Tsy dia fahita firy ny alika 6 amin'ny herinandro 6. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra dia misy ny mari-pamantarana manokana (ny mety hisorohana ny fanalan - jaza , ny mety hitrangan'ny tsy fahampiana). Mandritra ny fikarakarana, ny dokotera dia mamaritra ny foetus (maromaro ny embryos), dia manombana ny fahatanterahan'ny rafi-pandehan'ny kardinôazy (manoratra ny isa am-pandriana, amin'ny isa 140-160 isa-minitra). Mandritra izany fotoana izany dia esory ny mety hisian'ny soritr'aretina.
Zava-doza mandritra ny herinandro 6 herinandro
Ny vanim-potoan'ny herinandro 6 herinandro dia ny fiandohan'ny fizotry ny dingana. Ny fiantraikan'ny fahasarotana sy ny piozolojia amin'izao fotoana izao dia ambony. Anisan'ireo loza mety hitranga amin'ity vanim-potoana ity:
fananganana antibiotika entrauterine ny foetus .
Toxoplasmosis - soritr'aretin'ny vehivavy
Herinandro vody 19 herinandro - ny voalohany mampihetsiketsika sy ny fihetseham-pon'ny reny
Ny rano mineraly amin'ny fitondrana vohoka
Dopplerometry amin'ny fitondrana vohoka - transcript
Kolotsaina nandritra ny fitondrana vohoka
Nahoana no tsy bevohoka ny vehivavy matory ao an-damosiny?
Nahoana no tsy afaka manova ny toaka ny vehivavy raha tsy bevohoka?
Museum of Folk Art American
I Irina Sheik dia niverina tao amin'ilay lampihazo taorian'ny nahaterahany
Metronidazole amin'ny gynécologie
Tingrin'ny voaloboka magnolia - tombony sy fahasimbana
Ny andro nahaterahana
Fanomezana ho an'ilay zazalahy 5 taona
Fanambadiana zazakely ho an'ny zaza vao teraka
Nalain'i Emilie Clark indray teo anoloan'ny fakantsary tsy dia malemy loatra
Alefaso amin'ny saosy saosy ao anaty vilia fanosotra
Tranoben'ny teratany Pythagoras
Leopard leopard 2013
Olon-katsaka - tombo-tsoa mahasoa sy fanoherana
Angelina Jolie dia mandamina ny zanany lahy 11 taona hiasa